Lalàn'ny fifamoivoizana :: Voafetra ny fiara mahazo mampiasa fitaratra miloko mainty • AoRaha
Lalàn’ny fifamoivoizana Voafetra ny fiara mahazo mampiasa fitaratra miloko mainty
Miverina mampahatsiahy momba ny fampiasana ireo fiara misy fitaratra miloko mainty ny minisiteran’ny Fitaterana sy ny fizahantany. Nampahafantarin’izy ireo fa voafetra ho an’ireo tompon’andraiki-panjakana ihany ny fampiasana fiara misy ny fitaratra mainty na «vitre fumée»: ny filohan’ny andrimpanjakana, ny solombavambahoaka sy senatera, ny praiministra sy ministra, ny diplaomaty sy kaonsily sy ireo manamboninahitra ambony am-perinasa ary ny tompon’andraiki-panjakana voalohany any amin’ny faritany.
Nomarihin’ity fampahatsiahivana ity ihany koa fa ny minisiteran’ny Fitaterana sy ny fizahantany irery ihany no manome alalana sady afaka mamoaka ny taratasy fahazoan-dalana ho an’ny fiara afaka mampiasa ny fitaratra mainty.
Mikasika an’ireo fiara manana fitaratra mainty efa hatrany amin’ny ozinina namokarana azy kosa dia ny fitaratra ao aoriana ihany no azo atao mainty rehefa nahavita fitiliana sy fankatoavana avy amin’ny sampana fitiliana fiara na ny DGSR. Mety hisy ny hetsika fisavana tampoka hataon’ireo tompon’andraikitra ao amin’ny minisitera ka raha misy minia mandika izao lalàna izao dia miafara amin’ny fanasaziana sy fampidirana trano fihibohana na ny fahatrarana an’ireo mpandika lalàna.
Fanalefahana ny fitohanan’ny fiara Zandary an-jatony naparitaka eto an-drenivohitra
Toetr’andro Ahiana hivadika rivo-doza ilay tangoron-drahona
Fandaminana teny Tsaralalàna Miandry soson-kevitra matotra ny famindrana ny mpivarotra
Sandan’ny fitsaboana :: Mikaikaika hatrany ireo manana ny marary